Posted on फ्रेवुअरी 28, 2010 by toyadahal
एमाले नेता केपी ओली चढ्ने गाडी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रहरीले छापामारशैलीमा लगेको छ　। एक सातादेखि कर्मचारीको कब्जामा रहेको गाडी लिन प्रहरी मंगलबार राति प्राधिकरण छिरेको थियो　।
नेपालको अहिलेसम्मको महँगो जलविद्युत् आयोजना मध्यमस्र्याङ्दीको नाममा रहेको बा५च ४७१८ नम्बरको निशान जिप एमाले नेता ओलीले चढ्दै आएका थिए　। घाटामा गएको प्राधिकरणमाथि शोषण गरेको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणका कर्मचारीले ५ फागुनमा ओलीको गाडी नियन्त्रणमा लिएका थिए　। गाडी दुरुपयोगविरुद्ध सबै संगठनले प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई गत भदौमै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने माओवादी, एमाले र राप्रपासमर्थित कर्मचारी आन्दोलनमै छन्　।
ओलीले भने पूर्वगृहमन्त्रीका रूपमा आफूलाई सरकारले गाडी दिएको दाबी गर्दै आएका छन्　। तर, कर्मचारीले भने पूर्वमन्त्रीलाई गाडी दिने हो भने सरकारले नै दिनुपर्ने बताउँदै प्राधिकरणको गाडी दुरुपयोग गर्न नदिने अडान लिएका छन्　।
« सम्झनामा एउटा प्रेम मिस इन्डिया यूके २०१० »
Tej Rai, on फ्रेवुअरी 28, 2010 at 10:44 अपराह्न said:
“विश्वमा सब-भन्दा गफाडी एसियाली, एसियालीमा पनि नेपाली, नेपालीमा पनि झापाली, झापालीमा पनि ओली र मैनाली” भन्ने हस्यौली बनेको थियो एकताका । मैनाली त पाखा लागि हाले । तर एमाले नेता केपी ओलीको गफले भने बिंडो धानेकै छ । नेपाल विधुत प्राधिकरणको ओलीले चढिरहेको गाडीको मर्मत खर्च र पेट्रोल खर्च लिन जाँदा कर्मचारी युनियनले कब्जा गरेकै दिन एउटा कार्यक्रममा ओलीले गफ दिएका थिए, “माओवादी भनेका लुटेरै हुन, त्यही भएर मेरो गाडी प्राधिकरणमा लुटे । मलाई लाज लागेको छैन, किन भने गोरु नांगै हिड्दा मैले लाज मान्ने गरेको पनि छैन ।” कर्मचारीले हावा खुस्काएर राखेको गाडी, राता-रात प्रहरी पठाएर लुटेर लगेको गाडीमा सररर हिड्दा अहिले ओलीजीलाई लाज लागेको छ कि छैन होला ? हुन त, गोरु नांगै हिड्दा भुक्ने कुकुर पनि नांगै हिड्दा के को लाज ? यो कुरा त जनताले पनि बुझेकै छन नी । ओलीज्यू ! हामी मैन बत्तीले नै काम चलाऊदै गरौला, हजुरहरु मज्जाले पजेरो चढे हुन्छ, परेको हामी निर्धा-निमुखा जनताले बेहोरौंला ।